मलालाको भनाइबाट किन भड्कियो चिनियाँ मिडिया ? – Etajakhabar
मलालाको भनाइबाट किन भड्कियो चिनियाँ मिडिया ?
काठमाडौँ‘ – मलालाले आफूजस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको आलोचना गर्नुअघि रखाइन प्रान्तमा मच्चिएको हिंसासित जोडिएका तथ्यबारे जानकार हुनु आवश्यक छ’ नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित पाकिस्तानकी मलाला युसुफजाईले म्यानमारको रखाइन प्रन्तमा रोहिंग्या मुसलमानविरुद्ध जारी हिंसाबारे ४ सेप्टेम्बरमा एक वक्तव्य सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यस वक्तव्यमा मलालाले भनेकी थिइन् कि जब–जब उनी म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानीहरूको पीडाको समाचार हेर्छिन्, तब–तब उनी भित्रैदेखि दुःखी हुन्छिन् ।
मलालाले आफ्नो वक्तव्यमा भनेकी थिइन्– हिंसा रोकिनुपर्छ । मैले म्यानमारका सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका ससाना बालबालिकाको एउटा तस्बिर देखेकी थिएँ । यी बालबालिकाले कसैमाथि आक्रमण गरेका थिएनन् । तर, यिनीहरूलाई बेघरबार गरिएको छ । यदि यिनीहरूको घर म्यानमार होइन भने यिनीहरू पुस्तौँपुस्तादेखि कहाँ बसोवास गर्दै आएका थिए रु
मलालाले अगाडि भनेकी छिन्– रोहिंग्या मुसलमानलाई म्यानमारले नागरिकता दिनुपर्छ । अन्य देश, जसमा मेरो देश पाकिस्तान पनि पर्छ, उनीहरूले पनि बंगलादेशले जस्तो विस्थापित रोहिंग्यालाई शरण दिनुपर्छ र उनीहरूलाई आवश्यक सरसामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । मलालाले आफ्नो वक्तव्यमा यो पनि लेखेकी छिन्– म पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि लगातार यस त्रासद र लज्जाजनक व्यवहारको निन्दा गर्दै आइरहेकी छु । म अझै पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित आङ सान सुकीका तर्फबाट कुनै ठोस कदम उठाइने प्रतीक्षामा छु । यसलाई सम्पूर्ण विश्वका साथै रोहिंग्या पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
मलालाले आफ्नो वक्तव्य ट्विटरमार्फत जारी गरेकी थिइन् । यस वक्तव्यमा कैयौँ मानिसले प्रतिक्रिया दिएका छन् । कैयौँ मानिसले मलालाले वास्तविकता बुझ्दै नबुझी यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ उनले आफ्नो देश पाकिस्तानको सरकारलाई रोहिंग्याका लागि ढोका खुला गर्न किन अपिल गरिरहेकी छैनन् भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले पनि मलालाको वक्तव्यमाथि प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले लेखेको छ– मलालाले आफूजस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको आलोचना गर्नुअघि रखाइन प्रान्तमा मच्चिएको हिंसासित जोडिएका तथ्यबारे जानकार हुनु आवश्यक छ ।
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ– यो संकट स्वयं मुस्लिम चरमपन्थीले नै पैदा गरेका हुन् । उनीहरूले म्यानमारमा सरकारी अखडामा आक्रमण सुरु गरेका थिए । उनीहरूको आक्रमणको जवाफमा म्यानमारको सुरक्षा निकायले कारबाही गर्नुपरेको हो । अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम र बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी जनसंख्याबीच जातीय तथा धार्मिक संघर्षको आधार निकै लामो समयदेखि तयार भइरहेको थियो ।
ग्लोबल टाइम्सको भनाइ छ कि जसरी मलालालाई आफ्नो देशका कैयौँ मुद्दाबारे थाहा हुँदैन, त्यसैगरी यस समस्याबारे पनि उनको जानकारी अधुरो छ । चीनको यस सरकारी पत्रिकाले लेखेको छ– म्यानमारको रोहिंग्या संकट निकै जटिल छ । र, यसको समाधान छोटो समयमा गर्न सकिन्न ।
ग्लोबल टाइम्सले मलालाई लिएर अगाडि लेखेको छ– मलालालाई तालिबानका साथ निडर भएर लडेको हुनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । मलाला आफैँ आतंकवादबाट पीडित भएकी छिन् । उनले आफ्ना अनुभवका आधारमा मुस्लिम आतंकवादीबारे सोच्नु आवश्यक छ । मुस्लिम अतिवादी समूह र कथित इस्लामिक स्टेटजस्ता संगठन संसारभर भइरहेका कैयाँै आक्रमणका लागि जिम्मेवार छन् ।
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ– म्यान्मारमा चरमपन्थीविरुद्धको कारबाहीलाई लिएर मलाला बिल्कुलै अन्जान छिन् । उनलाई म्यान्मारको स्थितिबारे पढ्नु जरुरी छ । सूचीविरुद्ध मलालाको आलोचना बिल्कुलै उचित छैन । शान्तिकी अग्रदूत बन्नुको साटो मलालाले अझै अत्यन्त धेरै सिक्नु जरुरी छ । २०१२ मा मुस्लिमल चरमपन्थीहरूले मलालाको लगभग हत्या गरिदिएका थिए । त्यसैले, उनले सबैभन्दा पहिले मुस्लिम चरमपन्थीहरूलाई आफ्नो निसानामा पार्न सक्नुपर्छ ।
मलालाको यस वक्तव्यमाथि भारतमा पनि मानिसहरूका प्रतिक्रिया अगाडि आएको छ । वरिष्ठ पत्रकार तवलिन सिंहले लेखेका छन्— अन्य नोबेल विजेताझैँ मलालाले पनि पाकिस्तानी आर्मीले बलुचिस्तानमा जे गरिरहेको छ, त्यसको विरोध गरेको त कहिल्यै सुन्न पाइएन । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २७, २०७४ समय: ९:३७:०४